DOWNLOAD ရေယာဉ်စုအယ်လ်အယ်လ်ဣသရေလအမျိုးကိုလေကြောင်းလိုင်း v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 353 ကို MB
downloads ရယူရန္ 102 781
Auto-installer ကို / အထုပ်ထဲမှာအပြီးအစီးစာရင်း
Rikoooo ဒီဗူးပျံသန်းမှု Simulator X ကို SP2014 / Acceleration နှင့်သဟဇာတဖြစ်နှစ်တွင်2စဉ်အတွင်းပြည့်စုံအယ်လ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်တစ်ဦးကရေတပ်တင်ဆက်ဖို့ကျေနပ်သည်နှင့် Prepar3Dv1 (v2 ဤနေရာတွင်စစ်ဆေး) ။ ငါတို့သည်ဤအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ pack ကိုအပေါင်းတို့သည်စာရေးသူတစ်ဦးကိုအထူးကျေးဇူးပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဣသရေလအမျိုး၏အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် 1948 ၌တည်, ကျွန်တော်တစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုနိုင်ငံတကာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသို့စိုက်ပျိုးကြပါပြီ။
ဝန်ဆောင်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်မှတက်ရောက်, ငါတို့ခရီးသည် '' လိုအပ်ချက်များကိုအချိန်ပေါ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအာမခံအသုံးပြုပုံအခါတိုင်း, EL AL ကမ္ဘာ့သုံးအများဆုံးအကျိုးရှိစွာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတဦးအဖြစ် IATA ကသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 77 ရောင်းအားရုံးများ၏နိုင်ငံတကာကွန်ယက်ကိုကထောက်ခံသည်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံ, အတူ, EL AL ဆုံးသောအစ္စရေးဧညျ့, အချိန်ပျံသန်းကို EL AL ခရီးသွားလာ့အဆင်ပြေ mode ကိုထက်ပိုမိုစေသည်ချစ်ကြည်ရေးနှင့်စိတ်ကြိုက်ထိတွေ့ပေးထားပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရသာမှဖြည့်ဆည်းပေးသောသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အားသာချက်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားသောပေါင်းစပ်အတူ, EL AL အောင်ကမ္ဘာ၏တိုင်းထောင့်မှတစ်ဦးနှစ်သက်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတံခါးပေါက်ဖြစ်လာသည်။ (အရင်းအမြစ်: အယ်လ်အယ်လ်ဝက်ဘ်ဆိုက်)
- ဘိုးအင်း 737-700 + VC ကို
- ဘိုးအင်း 737-800 + VC ကို
- ဘိုးအင်း 737-900 + VC ကို
- ဘိုးအင်း 747-400 + VC ကို
- ဘိုးအင်း 747-400F Cargo + VC ကို
- ဘိုးအင်း 767-300ER VC ကိုဒါပေမဲ့ပြီးပြည့်စုံ 2D panel ကိုအဘယ်သူမျှမ
- ဘိုးအင်း 777-200ER + VC ကို အပိုဆု:
အောက်ကလေယာဉ်သင်္ဘောများ၏သမိုင်း၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်နောက်တဖန်မထူးချွန်ဖြစ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်. ထိုသူတို့တစ်တွေဆုကြေးငွေအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။
- ဘိုးအင်း 747-200 + VC ကို (RFP ဟောင်း livery)
- ဘိုးအင်း 757-200 + VC ကို
- ဘိုးအင်း 767-200 (ဟောင်း livery) VC ကိုဒါပေမဲ့ပြီးပြည့်စုံ 2D pane ထဲကမရှိ
ကမ္တာ့ features တွေ:
တစ်ခုချင်းစီကိုလေယာဉ်ပျံ, အိမ်ရှင်မများနှင့်လေယာဉ်မှူးစကားပြောရန်များအတွက်ကြေငြာချက် panel ကိုစနစ်ဖြင့်ထည့်သွင်း GPWS (System ကိုသတိပေးမြေပြင် Proximity), Pushback စနစ်, ထုံးစံအသံ, ညဥ့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Animation, အသုံးအများဆုံး bug တွေ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်, ရန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါတယ် P3Dv1 အသစ် gauge နှင့်ပိုပြီး။
အားလုံးလေယာဉ်ပျံစသည်တို့ကို, စာရွက်စာတမ်းများ, အများဆုံးကိစ္စများတွင်ထိုသို့ readme ဖိုင်တွေရဲ့လက်စွဲ, doc နှင့်အတူထည့်သွင်းနေကြတယ်
ပြင်ဆင်မှု 3D v2.x: မျှော်လင့်ထားသဟဇာတမ
- အားလုံးလေယာဉ်တင်သဟဇာတဖြစ်ကြ P3DPushback သည်ဘိုးအင်း 2-747 အသင့်ဖြစ်ပြီလား (RFP) မှလွဲ. v200 အချို့ gauge ကို "ဆီ panel က" နှင့် "အသံက gauge" အပါအဝင်, အလုပ်လုပ်ကြပါဘူး။
- အ 777-200ER ၏ VC နှင့် 757-200 မရှိအလုပ်လုပ်တဲ့ကလစ်နှိပ်အစက်အပြောက်များနှင့်အချို့သောအထွာ flash ကိုအများရှိသော်လည်း, သင် 2D panel ကမှလေယာဉ်ပျံသန်းနိုင်သည်။
- အ Anti-ဒုံးကျည်စနစ်ကအောက်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး P3Dv2 - သတင်းစာ (ဈ)
- သေချာသလောက်ကတော့အခြား bug တွေပေမယ့်သေးငယ်။
အယ်လ်အယ်လ်ရေတပ်, anti-ဒုံးကျည်စနစ်သီးသန့် (သတင်းစာ (ဈ) ကိုသက်ဝင်ဖို့) ကိုလေယာဉ်ပျံပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က El-AL ကမသုံးခဲ့ပါသောကွောငျ့အဟောင်းအဆင်းအရောင်နှင့်လေယာဉ်များ, ဒီစနစ်တပ်ဆင်ထားကြသည်မဟုတ်။ ဒီစနစ်အတိုအကွာအဝေးဒုံးကျည်များဆန့်ကျင် takeoff နှင့်ဆင်းသက်စဉ်ကာလအတွင်းအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်, ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ပစ္စည်းကိရိယာများလျှို့ဝှက်စောင့်ရှောက်ရန်လိုလားနေသောကြောင့် El-AL ဒီဗူးထက်အတိအကျသည့်စနစ်တစ်ခုကိုဟုမဆိုနိုင်ပါ။ သို့သော် C-130 Hercules အမှန်တကယ်အသုံးပြုကြသည်။ သက်သေပြပုံရိပ် (လက်ဝဲ):
ဘိုးအင်း 747-200 RFP:
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, Rikoooo များအတွက်ဘိုးအင်း 747-200 RFP (Pushback အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား) အဆင်ပြေအောင်နှင့်တညျ့ FSX နှင့် P3Dv1 မူရင်း gauge ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း add-on FS2004 အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတွင်ရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်သည့်အလွန်အစစ်အမှန်လက်တွေ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များ၊ INS (Inertial Navigation System) စသည်ဖြင့်ရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူကြိုက်များသည်မသေးအွန်လိုင်း) အင်ဂျင်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်အောက်မှာစတင်ရန် FSX။ ဤ add-on တစ်ဦးအဖြစ်ရရှိနိုင် ဆုငှေ ဒီအထုပ်ထဲတွင်ပေမယ်မရှိတော့အမှန်တကယ်သင်္ဘော၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Pack တွင်ပါဝင်သောလက်စွဲစာအုပ်များကိုလိုက်နာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Start Menu / Add-ons Rikoooo / Flotte El Al FSX & P3D / မှတ်တမ်းကို XXX သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်အားဖြင့်: "ကို C: / Users /votre_username /AppData / Roaming / Microsoft / Windows / Start Menu / Programs / Rikoooo Add-ons"
သတိပေးချက်: အဆိုပါ INS gauge (Inertial Navigation System ကို) ကို 747-200 တွင်ထည့်သွင်းမထားဘူး, သင်သီးခြားစီခြင်း, 747 panel ကိုပြီးသား Rikoooo အားဖြင့် Pre-configured ဖြစ်ပါတယ်ဒီ gauge Delco Carousel IV-A INS v နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် Download ပြုလုပ်ရန်ရှိသည်။ 1.51 မှ simufly.com.
ဒေါင်းလုပ် Delco Carousel IV-A INS (အော်တို installation ကို): https://www.simufly.com/ins/download.html
747-200 RFP (အပိုဆု) မှအနည်းငယ်ပုံရိပ်တွေ:
(ကျေးဇူးတင်ချဲ့ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ screenshots များကိုကလစ်နှိပ်ပါ တိုင်းရင်းသားရေးရာFSX):
Author: Auto-installer ကို / အထုပ်ထဲမှာအပြီးအစီးစာရင်း
Easyjet ရေယာဉ်စု v1.0 FSX & P3D
LTU အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းရေယာဉ်စု FSX & P3D
စော်ဘွားရေယာဉ်စု FSX & P3D 3.0